I-Segway miniLITE kunye ne-miniPLUS, iimodeli ezintsha zothutho olukhawulezayo nolukhuselekileyo | Iindaba zeGajethi
Ngokuqinisekileyo, ukuba sibiza igama elithi Segway, ezothutho zinamavili amabini ezikuvumela ukuba uhambe ngokukhululekileyo esixekweni zize engqondweni. Nangona kunjalo, inkampani ineemodeli ezininzi kwikhathalogu yayo. Kwaye ngexesha lomnyhadala we-IFA eBerlin uveze iimodeli ezimbini ezintsha eziza kongezwa kwisibonelelo saso kamva kulo nyaka. Imalunga ne- Segway miniLITE kunye ne-miniPLUS.
Kuyinyani ukuba kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukuthuthwa kwemfashini yayizizikuta zombane ezaziwa njenge iibhodi zokudlala. Olu hlobo lweevili ezimbini luye lwanda phakathi kwabasebenzisi, nangona kuyinyani ukuba zininzi iingxaki ezibangeleyo, kungekuphela malunga neengozi kodwa nokungasebenzi kakuhle kwezixhobo.
I-Segway miniLITE entsha kunye ne-miniPLUS bajonge icandelo loluntu elifuna ukuhambisa ngokulula. Kwaye, kukhuseleke ngokusemandleni. Zombini ezi modeli zomelele kwaye enkosi kumavili abo amangalisayo, baya kuba nakho ukungena kwiindawo ezimbi. Ngokunjalo, kwaye njengoko igama layo libonisa, imodeli I-Segway miniLITE ijolise ekusetyenzisweni ukususela kwiminyaka yobudala. Ngokutsho kwenkampani, le mveliso iboniswa kubantwana abaneminyaka engama-6 ubudala.
Ngombulelo kwiibhetri zayo, unokuhamba ubuninzi beekhilomitha ezili-18 zomgama. Sicinga ukuba eli nani aluthatheli ingqalelo uhlobo lwendawo kunye nomzobo. Ngelixa ngesona santya siphezulu Unokufikelela kwi-16 km / h. Inxalenye yayo, ukuthutha akuyi kuba yinto ebiza kakhulu kuthi: inobunzima obuyi-12,5 yeekhilogram.
Okwangoku, ukuba sithetha ngayo I-miniPLUS kwe-Segway, ubudala bokusetyenziswa kwayo apho iqala khona yiminyaka eli-12. Ubungakanani bayo bukhulu kwaye kule meko umahluko kumgama wokuhamba nawo uyabonakala: iikhilomitha ezingama-35. Kwakhona, esona santya siphezulu sinokufikelelwa yi-Segway miniPLUS yi-20 km / h. Kwaye ukuba ubunokuzibuza, ubunzima bayo bebonke yi-16,5 kg.
Ngoku, kuba asisoloko sinezandla zethu sikhululekile ukuphatha izinto ezininzi kunye nathi, oku I-miniPLUS ye-Segway ibandakanya indlela 'yokundilandela'. Kwaye kufuneka uyilawule kuphela ngolawulo olukude. Okwangoku akukho nanye kwezi modeli inexabiso eliqinisekisiweyo. Kodwa ukuba sikhokelwa yile nto siyaziyo ngabazalwana bayo bekhathalogu, kufanele ukuba babekujikeleze-ubuncinci- i-euro ezingama-600.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Segway miniLITE kunye ne-miniPLUS, iimodeli ezintsha zothutho olukhawulezayo nolukhuselekileyo